U-Michael Spicer uyibekile induku ebandla, kuloba uBusi Mavuso - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
SINGASHO sithi iBlack Leadership South Africa (iBLSA) iwumphumela wemizamo kaMnu uMichael Spicer yokwakha inhlangano yamabhizinisi engeke ishabalale, elungele ukufaka isandla ekuthuthukiseni iNingizimu Afrika.
Kwenzeka ngaphansi kweso lakhe ukuthi inhlangano iSouth African Foundation eyayigxile ekuvikeleni amabhizinisi ngesikhathi sobandlululo iguqulwe ibe yiBLSA ngo-2005. U-Spicer wayihola iminyaka eyisithupha inhlangano yethu, wayenza yaba nezwi elizwakalayo lamabhizinisi ikwazi ukwenza ucwaningo futhi ibhunge nohulumeni nezinye izinhlaka.
Ukushona kwakhe ngesonto elidlule kusithusile sonke kodwa ushiye umsebenzi omuhle kwiBLSA.
U-Spicer ubeyisazi somlando, usomabhizinisi futhi ubekholelwa kakhulu ekutheni iNingizumu Afrika ingahlomula uma amabhizinisi nohulumeni bengasebenzisana kahle. Ubevamile ukuba sekhaleni lokwakha lobu budlelwane.
Ngenkathi eshiya ophikweni lwemfundo ephakeme eqokwa wusihlalo we-Anglo American uMnu uGavin Relly ukubheka ezokuxhumana kwale nkampani nohulumeni eminye yemisebenzi yakhe yokuqala kwakungukuthamela inkulumo engehlanga kahle eyethulwa wuPW Botha ngo-1985, neyashabalalisa onke amathemba okuthi uhulumeni kaBotha ungashintsha ukwenza.
Emva kweminyaka emihlanu waba yisekela likasihlalo weConsultative Business Forum, ithimba labaholi bamabhizinisi elakhelwa ukubonisana neCosatu, ne-United Democratic Front nobuholi obusha ngokusebenzisana neCodesa (iCongress for a Democratic South Africa).
Ubaziwa ngokuba wumhlaziyi onohlonze futhi engananazi ukukhuluma iqiniso linjengoba linjalo ngisho lingehli kahle kubalingani bezepolitiki. Nokho, ubekwazi ukubona isikhathi esifanele sokwenza lokhu.
Ngokuqhubeka kwesikhathi waba neqhaza elibalulekile kwiSA Tourism nakwiBrand SA, ekhangisa izwe emhlabeni. U-Spicer ubeyisishoshovu esikholwa wukuthi ibhizinisi kumele livule amathuba omsebenzi futhi liqede nendlala, ekusebenzeni kwakhe ubephikelele ekubonisaneni nohulumeni ukuthi kusekwe amabhizinisi ngendlela efanele ukuze achume.
Nakuba ethathe umhlalaphansi ngo-2015 ngenkathi ehla esikhundleni sokuba wusihlalo we-Anglo American South Africa, (kodwa) uqhubekile nokungakhathali ukumela izwe. Ubewumxhumanisi onomdlandla kwaze kwaba sekugcineni.
Bengikuthakasela ukuthola ama-email akhe anemiyalezo eseka imibono nomsebenzi weBLSA ebengisuke ngingayicelanga. Ngiyazi baningi nabanye akade ebaseka nge-email nemiyalezo kaWhatsApp ebikhuthaza.
Abaholi abaningi bamabhizinisi baphawulile ezinsukwini ezidlule ngeqhaza elibanjwe wuSpicer ezweni. Umlando wakhe eBLSA ucacile nakwezinye izinhlangano eziningi. Ngifisa ukudlulisa amazwi enduduzo kumkakhe u-Irene nakumadodana akhe uNicholas noSimon.
Inhlangano eyengamele ezokuxhumana i-Independent Communications Authority of South Africa isikwazile ukwethula indali ye-spectrum emva kokubambezeleka iminyaka ewu-12. Leli yigxathu elikhulu.
Leli gxathu lizosiza izinkampani zezingcingo zikwazi ukusebenza ngokukhululeka futhi zikwazi ukuncintisana nezinkampani zakwamanye amazwe. Kepha-ke loku kubambezeleka kungelinye ithuba eliphuthele iNingizimu Afrika ngoba le mihlomulo nokwehla kwamanani e-data yinto okufanele ngabe yaqala ngo-2010.
Imigudu okufanele ilandelwe yizinkampani ezifuna ukuzikhiqizela ugesi iwumqansa. Nakuba sekuvumeleke ukuthi izinkampani zingazikhiqizela ugesi ongafinyelela ku-100MW kodwa izinkampani kusalindeleke ukuthi zigcwalise amaphepha afanayo futhi zilandele imigudu efanayo ebezingadlula kuyona njengasekuqaleni.
Isithangami sendlale okuhle nokubi ngempi yeRussia ne-Ukraine. USLINDILE KHANYILE uyabika